Indlela yokuba ngumculi we tattoo: iziseko zokwazi | Ukuzoba
Indlela yokuba ngumculi we tattoo: iziseko ekufuneka uyazi
Ukuba ukhe wazibuza ukuba unganjani Umzobi we tattoo kuba akukho nto uyithandayo kweli hlabathi ngaphandle kokupeyinta ulusu ngokusisigxina ngobugcisa bakho, ungakhathazeki, apha siza kukunika amanyathelo okuqala onokuwalandela ukukhokela ikhondo lakho lomsebenzi.
Uya kubona ukuba ufunda ukuba Umzobi we tattoo Akukho lula konke konke kwaye kufuna umgudu omkhulu kunye nokuzincama ukuze uyenze kakuhle. Kwaye inyani kukuba ukusilela kumvambo kunokukubiza kakhulu, wena kunye nomthengi wakho!
1 Funda ukuzoba
2 Funda nzima kwaye uziqhelanise nangakumbi
Ngokucacileyo, into yokuqala ekufuneka uyifundile ngaphambi kokuba ube ngumzobi we tattoo kukuzoba, kwaye ayisiyiyo kuphela, kodwa ilungile. Ukwenza i-tattoo akuphelelanga nje ekulandeleleni iitemplate kulusu lomthengi, kodwa ezona tattoo zibalaseleyo zineendlela zazo ezibenza bahluke kwabanye kunye nezikhokelela ekubeni baziwe kwaye babe nolayini emnyango we studio sabo.
Kungenxa yoko, Kubalulekile kungekuphela ukuba unokukopa, kodwa ukuze ukwazi ukujongana nemiceli mngeni yokwenyani njengokuyila iziqwenga zakho kwaye ubenze babenomtsalane kangangokuba ushiye wonke umntu evule imilomo (hayi, iqhinga lokuba ngesithandathu kunye nesine ndenza umzobo wakho awufanelanga).
Funda nzima kwaye uziqhelanise nangakumbi
Nangona kungekho ndawo inokubonelela ngokusesikweni ngokusesikweni ngendlela yokuba ngumculi we tattoo. Nangona kunjalo, Kuyacetyiswa ukuba ubhalisele ikhosi yokudibanisa ulwazi kwaye ulusebenzise (Njengabahlobo bakho bazimisele ukufumana itattoo yasimahla). Uya kufumana iikhosi kumaziko ahlukeneyo, nangona enye yezona zicetyiswayo zezona zinikezelwa siSikolo esiSemthethweni seTattoo Masters, esineeofisi kwizixeko ezahlukeneyo kwaye ivuliwe ukusukela ngo-1984.
Nje ukuba ufunde ukuba ngumculi we tattoo, indlela yakho ayipheli, kuba kuya kufuneka ubeke ubugcisa bakho. Eyona nto intle kukufunda kwisifundo osithandayo ngaphambi kokuba usungule ukuvula eyakho ukomeleza ulwazi lwakho.
Siyathemba ukuba sisombulule ukungathandabuzeki kwakho malunga nokuba ngumculi we tattoo. Khawusixelele, unamava kule ndawo? Ungacebisa ikhosi okanye ingcebiso komnye umntu? Khumbula ukuba ungasixelela ukuba ufuna ntoni kumagqabaza!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Amagcisa eTattoo » Indlela yokuba ngumculi we tattoo: iziseko ekufuneka uyazi
UPedro V sitsho
Mholweni. Inqaku elihle, eligubungela ukungathandabuzeki esinakho sonke xa siqale koku. Ndiqale iminyaka emi-3 eyadlulayo ikhosi ye-ESAP ( https://www.esapmadrid.com/ ) kwaye inyani kukuba ndonelisekile kakhulu sisigqibo sam sokukhokela ubomi bam bokusebenza kwezi ndlela.
Phendula kuPedro V
I tattoo entsha kaJanel Parrish ayizukubonwa
Intsingiselo yeetato ze-olive branch, zifanekisela ntoni?